१३ औं साग औपचारिक रुपमा सुरु, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरिन् उद्घाटन, यस्ता छन् सागका बिशेषता ! - सुनाखरी न्युज
१३ औं साग औपचारिक रुपमा सुरु, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरिन् उद्घाटन, यस्ता छन् सागका बिशेषता !
Posted on: December 1, 2019 - 6:21 pm
काठमाडौँ — दक्षिण एसियाको ओलम्पिक मानिने साग प्रतियोगिता १३ औं संस्करण औपचारिक रुपमा दशरथ रंगशालमा सुरु भएको छ ।
मार्चपासमा नेपालको झन्डा भारोत्तोलन खेलाडी कमलबहादुर अधिकारीले बोक्नेछन् । उनले २००६ मा स्वर्ण पदक जितेका थिए, जुन भारोत्तोलनमा नेपालको अहिलेसम्मको एउटै स्वर्ण हो । त्यस्तै राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान पारस खड्काले खेलाडीका तर्फबाट तथा ब्याडमिन्टनका दीपक श्रेष्ठले निर्णायकका तर्फबाट शपथग्रहण गर्नेछन् । सातै प्रदेशमा पुर्‍याइएको ओलम्पिक टर्च तेक्वान्दोका दीपक विष्टले बाल्नेछन् । उनलाई अन्य ओलम्पियन खेलाडीले साथ दिनेछ । काठमाडौं र पोखरा यसपटकका मुख्य खेलस्थल हुन् ।
काठमाडौं, ललितपुर, कीर्तिपुर र गोकर्णेश्वरमा एथलेटिक्स, बास्केटबल, थ्रीबाईथ्री बास्केटबल, बक्सिङ, पुरुष क्रिकेट, साइक्लिङ, फेन्सिङ, पुरुष क्रिकेट, गल्फ, जुडो, कबड्डी, कराते, खोखो, पौडी, सुटिङ, स्क्वायस, टेबलटेनिस, तेक्वान्दो, भलिबल र उसु आयोजना हुनेछन् ।